I-Hopewell Lodge ngasolwandle - I-Airbnb
I-Hopewell Lodge ngasolwandle
Igumbi e-i-lodge ibungazwe ngu-Lynley
**Sicela Uqaphele: Ngenxa yokuvalwa kwemigwaqo, i-Hopewell okwamanje ingena etekisini lamanzi kuphela - izindleko ezengeziwe ziyasebenza **
Siyakwamukela epharadesi lethu, i-Hopewell ibilokhu iyindlu yezivakashi kusukela ngeminyaka yawo-1950, enendawo emangalisayo ngasemanzini ku-Pristine Kenepuru Sound. Ihlala kumahektha angama-40 ehlathi lendabuko, lapha ungabalekela izixuku ezihlanyayo futhi ujabulele indawo enhle yemvelo yaseNew Zealand.
I-Hopewell inesakhiwo esihle esinekhishi elikhulu lesimanje lezivakashi elihlome ngokuphelele, izindawo zokudlela, indawo yokuphumula, indawo ye-BBQ, amadekhi, indawo yokuhlala engadini, amabhishi, ukuhamba ngezinyawo kanye nempahla eminingi yokuzilibazisa, ama-kayak, amabhayisikili, ukudoba ama-SUP's.
I-Hopewell iyindawo yokulala ewina imiklomelo eminingi, edume ngendawo yayo emangalisayo, izinsiza ezinhle kanye nokungenisa izihambi kwangempela kwaseNew Zealand. Singakwazi ukuhlalisa abantu abangaba ngu-20 kumakotishi amaningi. I-Hopewell iyindawo ekahle yokuphumula nokuzilibazisa, ukuzulazula kuma-hammocks noma ukucwiliswa kubhavu oshisayo. Izingadi ezinhle, ugu oluhle lokuhlola nokuqoqa izimbaza zendawo. Ungakwazi ukujabulela ukuhamba, kayaking, ukudoba, ukubhukuda nokunye okuningi. Kukhona ngisho nenkundla yegalofu enhle ngezansi komgwaqo. Kunokufinyelela kwetekisi lamanzi ku-Queen Charlotte Track uma ungathanda ukuhamba ngezinyawo izinsuku, noma ulandwe esikebheni sethu bese ujoyina i-Pelorus Mail Boat egijima kumsindo wangaphandle.
Jabulela ukuxoxa nabanye abahambi kanye nama-kiwi avame ukuza ukuzohlala noma kunesikhala esiningi uma nje ufuna isikhathi sokuphumula. Amakamelo abekwe kahle anemibhede emisha kanye nelineni elihlanzekile, ikhishi liyiphupho labapheki elinamahhavini amahle kakhulu, amafriji, amabhodwe namapani, imimese ebukhali nezitsha ezinhle njll. Futhi uma uthanda ukupheka ubusuku bonke upheka sikunikeza amapizza amnandi, isinkwa esenziwe ekhaya namakhofi e-espresso. Okudingayo ukuletha ukudla nokumamatheka.
Letha okwakho ukudla, azikho izitolo lapha ngaphandle. Sinendawo eningi yesiqandisi/isiqandisi kanye nekhabethe lokugcina ukudla. Izitolo ezinkulu zokugcina zise-Picton, Blenheim noma Nelson futhi kukhona encane e-Havelock.
Sinazo izimpukane ngakho khumbula ukuletha umuthi oxosha izinambuzane.
Siyakwamukela epharadesi lethu, i-Hopewell ibilokhu iyindlu yezivakashi kusukela ngeminyaka yawo-1950, enendawo emangalisayo ngasemanzini ku-Pristine Kenepuru Sound. Ihlala kumahektha angama-40 ehlathi lendabuko, lapha ungabalekela izixuku ezihlanyayo futhi ujabulele i…
4.97 (izibuyekezo ezingu-39)
I-Hopewell itholakala ehlathini lendabuko eduze kolwandle, omakhelwane bethu abaseduze baqhele ngekhilomitha. Kukhona indawo yokudlela ekahle ethekwini elingumakhelwane eliwuhambo lwemizuzu eyi-10, avulwa ngoNovemba kuya ku-Ephreli. Inkundla yegalofu yasendaweni iwukuzigqaja nenjabulo yomphakathi wethu. Umsindo we-Kenepuru ukude kakhulu futhi kunabantu abangaba ngu-60 kuphela abahlala ngasohlangothini lwethu loMsindo. Indawo enhle yokubalekela kukho konke! Ukuthula nokuthula nendawo enhle yemvelo, kufanele ukubone ukuze ukholwe. Idume ngokulima izimbaza nokudoba nge-snapper kanye ne-Queen Charlotte Track.
Sihlala esizeni endlini yethu ngakho sihlala sikhona ukuze sikusize phakathi kwamahora ka-8am no-8pm.